What is an Acknowledgment of Paternity Affidavit? — Ohio Department of Job and Family Services U bood waxyaabaha ugu waaweyn
Waa maxay Qirashada Dhaarta Aabannimada?
Sababtoo ah dhammaan caruurtu waxay uqalmaan faa’iidooyinka uu aabaha sharciga ah siin karo.
Qirashada Dhaarta Aabbanimada (JFS 07038) waa foom sharci ah ooy waalidiintu aan is qabin ay buuxiyaan si loogu daro magaca aabbaha saxda ah shahaadada dhalashada ilamaha. Markaad saxiixdo foomka, waalidiintu waxay aasaasayaan aabanimada canugooda - micnaheedu tahay aabaha sharciga ah ee la aqoonsan yahay.
Ohio gudaheeda, haddii haweenay la guursado wakhtiga dhalashada ama wakhti kasta 300 cisho ka hor dhalashada, ninka ayaa loo qaadanayaa inuu yahay aabaha dabiiciga ah ee ilmaha. Isbitaalka waxaa laga yaabaa inaynan ku qorin magaca "aabaha" dabiiciga ah / saxda ah shahaadada dhalashada.
Si kastaba ha noqotee, haddii hooyadu la furo iyadoo uur leh, digreetada furiinkana ay sheegeyso in ninku uusan ahayn aabaha ilmaha, hooyadu waa in ay isbitaalka siisaa nuqul ka mid ah digreetada furiinka dhammaystiran wakhtiga dhalashada canugeeda. Hooyadu iyo aabaha saxda ah waxay markaa kadib ku buuxin karaan Qirashada Dharta Aabannimada (JFS 07038) isbitaalka haddii ay doonayaan.
Soo daji Xuquuqaha iyo Mas’uuliyadaha
Waa maxay shuruudaha si loo buuxiyo foomka Qirashada Dhaarta Aabannimada (JFS 07038)?
Waalid kastaa wuxuu u baahan yahay Aqoonsi sawir leh iyo lamabarka Amniga Bulshada.
Aabaha: (taariikhda dhalashada, goobta dhalashada, darajada ugu sareysa ee la dhammaystiray, cinwaanka, shaqada iyo caymiska), iyo sidoo kale labada waalidba: (Magaca buuxa, cinwaanka hadda, gobolka iyo degmada dhalashada, taariikhda dhalashada, iyo LAB).
Labada waalidba waa in ay saxiixaan warqadda dhaarta iyagoo jooga nootaayada dadweynaha ooyna haystaan warqadda dhaarta oo nootaayadaysan, laakiin ma aha inay saxiixaan isla wakhti.
Nootaayadu bilaash ayaa lagu bixiyaa isbitaalada,diiwaangeliyaasha deegaanka iyo CSEAs-yada.
Xaggee baan ka buuxin karaa dhaarta aabannimada?
Qirashada Dhaarta Aabannimada (JFS 07038) ayaa laga buuxin karaa goobahan soo socda:
Wakhtiga dhalashada, waalidiinta aan is guursan ayaa waxaa la siiyaa fursad ay ku buuxiyaan warqadda dhaarta ee goobta isbitaalka ama xarunta dhalmada.
Kadib, warqadda dhaarta ayaa lagu buuxin karaa waaxda caafimaadka deegaankaaaga. Riix halkan si aad u heshid waax caafimaad.
Warqadda dhaarta ayaa sidoo kale lagu buuxin karaa goobta Hay’adda Fulinta Taageerada Ilmaha (CSEA). Riix halkan si aad u ogaatid CSEA-da ee gobolkaaga.
Dhamaan goobahan waxay leeyihiin shaqaale tababaran oo diyaar u ah inay waalidiinta ka caawiyaan buuxinta warqadda dhaarta ah. Waxay sidoo kale leeyihiin nootaayo ay shaqaaluhu ku nootaayaynayaan saxiixyada waaliddiinta. Waalidiintu waa inay aqoonsi sawir ah ee habbooon nootaayada keenaan.
Ma qabtaa wax su’aalo ah? Baar Bogga yaga ee
Qof kasta oo saxiixay warqadda Qirashada Dhaarta aabbanimada (JFS 07038) ayaa laga yaabaa inuu la yimaado tallaaba lagu hakinayo 60 maalmood gudahood saxiixxii ugu dambeyay ee ku qoran warqadda dhaarta. Isticmaal foomka: JFS 07029, Ka codso Waaxda Dhexe ee Diiwaangelinta Aabannimada Go’aanka iyo Ogeysiiska Aaabannimada.
Hay'adda fulinta Taageerada ilmaha ayaa halka ay ilmaha, mas'uulka ama qofka sharciyan masuulka ka ah ku nool yihiin ayay habkani uga caawin kartaa. Waxay ku lug leedahay buuxinta foomka hakinta, iska diiwaangelinta baaritaanka hidda-sidaha, iyo dhammeystiridda baaritaanka hidda-sidaha. CSEA-da waxay soo saari doontaa amarka aabanimada iyada oo ku saleysan natiijooyinka.
Kadib 60 maalmood gudahood, habka kaliya ee lagu hakinayo dhaarta ayaa ah in la keeno tallaabo maxkamadeed si hal sanno gudahood loo hakiyo ka dib marka ay noqoto mid kama dambeys ah.
Qofka loo qaato inuu yahay aabaha ilmaha sida ku cad sharciga Ohio oo aan saxiixin qirashada, qof kastaa ee saxiixay qirashada, ama mas'uulka ama ilaaliyaha sharciga ah ee ilmaha ayaa laga yaabaa inay keenaan tallaabo lagu hakinayo dhaarta oo ku salaysan khiyaanada, hanjabaad, ama khalad xaqiiq ah ee caddeynta.